महामारी, राजनीति र सत्ता (सम्पादकीय)
देश अहिले कारोना भाइरसको दोस्रो चरणको महामारीबाट ग्रसित छ । जनता त्राहीमाम गरिरहेका छन् । महामारी नियन्त्रण गर्न लगभग देशैभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । तर जनताले सर्वसुलभ ढंगले उपचार पाउन सकिरहेको छैन । प्राणवायुको अभावमा अकालमै नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । जनताले अस्पतालमा उपयुक्त ठाउँ पाइरहेका छैनन् ।
राजनीतिक निकासको बाटो
राज्य एउटा संस्था हो । यो व्यक्तिको गुण र दोषले कम तर संस्थागत संरचनाले बढी प्रभावित हुन्छ । तर निराश हुनुपर्ने र बाह्य शक्तिसँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने यी जति समस्या देखा परेका छन्, ती सबै नेपाल र नेपालीमाथि नै भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको भूमिका
संसदीय लोकतन्त्र संकटमा परेका बेला दलहरुलाई लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा चिनिन्छ । प्रतिनिसभा विघटन गरेर संविधान मिचेको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संसद पुनस्र्थापित भएपछि पनि राजीनामा नदिनु अर्को आरोप लागरिहेको छ । तर जो जसले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहे पनि उनलाई सत्ताच्युत गर्न असक्षम सावित भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरता वा बहिर्गमन वा नयाँ सत्ता समीकरणमा मूलतः दुई प्रवृत्तिमा राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । सत्ताको चरमोत्कांक्षा र त्यसबाट आकस्मिक अनपेक्षित भुँइमा बजारिंँदा फेरि एकछिन सत्ताप्रति चरम निराशा पैदा हुन्छ ।
अलमल कांग्रेस (सम्पादकीय)
कांग्रेससामु केही प्रस्ट चुनौती छन् । पहिलो, नेतापिच्छे बोली र व्यवहारमा देखिने अन्योल र द्विविधा । दोस्रो, संसद्को प्रभावकारिताका लागि गर्नुपर्ने सक्दो प्रयास । संसद् पुनःस्थापनाको नयाँ आयामलाई प्रस्ट रूपमा आत्मसात् गर्नका लागि आत्मविश्वासका साथ कांग्रेस परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।
बसन्तोत्सवको पर्व (सम्पादकीय)
होली पर्व घरपरिवार साथीभाई आपसमा रङमा रङ्गिएर उल्लासपूर्वक मनाउने फागुन पूर्णिमाको अवसरमा पहाडदेखि तराई र गाउँदेखि सहरसम्मका केटाकेटी, युवायुवती तथा प्रौढहरूका हूल तथा जत्थाहरू हातमा रङ र रङ्गीन घोल पदार्थ लिएर गाउँदै, बजाउँदै, रमाइलो र होहल्ला गर्दै आपसी रिसइबीलाई बिर्सेर उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने रङ्गीन पर्वको रूपमा लिइन्छ ।
जसपाको दौडधुप (सम्पादकीय)
राणनीतिक लाभ जसपाले उठाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने उसको नेतृत्वमा भर पर्छ । मधेशको नजरले हेर्दा तीनवटै दल मधेश मुद्दाप्रति उत्तिकै क्रुर देखिन्छन् । जसले माग पूरा गर्न साथ दिन्छ, उसैसँग सहकार्य गर्नु मधेशका लागि हितकर हुने देखिन्छ ।
संसद् पुनःस्थापनादेखि नेकपा नाम खारेजसम्म
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक अन्योलको किनारा ६५ दिनपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि लागेको छ । संवैधानिक इजलासको संसद् पुनःस्थापना गरे पनि त्यसपछि राजनीति सीधा रेखामा हिँड्न सकेको छैन ।
संसद पुनःस्थापनापछि के ?
अहिले जनताका सपना र आकांक्षामाथि कुठाराघात प्रहार भएको छ । जनताको विश्वास, कार्यकर्ताको मनोबल र पार्टीको साख गिर्नेगरी तल्लो तहसम्मको विभाजित व्यवहार र मानसिकता गलत बाटो हो । राजनीतिक कमीकमजोरीको आत्मालोचना गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको रक्षार्थ छरपस्ट रूपमा मतभिन्नता भएका नेताबीच दलीय संस्थागत निर्णयमा एकढिक्का भई अगाडि बढ्नु अर्को एउटा विकल्प छ ।
नयाँ सत्ता समीकरणमा जसपा (सम्पादकीय)
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरपछि सत्ता सञ्चालनमा नयाँ समीकरणको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै नयाँ समीकरणको अड्कलबाजी पनि हुन थालेको छ ।
प्रदेश सरकारहरूको तीनवर्षे यात्रा (सम्पादकीय)
प्रदेश सरकारहरु गठन भएको फागुन ३ गते तीन वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ फागुन ३ मा गठन भएयता प्रदेश सरकारहरूले जनताको तहसम्मै प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको आमबुझाइ छ ।
भारतीय सहयोगको प्रतिफल (सम्पादकीय)
भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख कोरोना खोपबाट नेपालले कोभिड परीक्षण सुरु भएको ठीक एक वर्षपछि कोभिड– १९ विरुद्धको खोप अभियान गरेको छ ।
भारतको खोप अभियान र छिमेकी देशहरू (सम्पादकीय)
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण निको पार्ने लागि अहिलेसम्म कुनै ’विशिष्ट’ औषधि फेला परेको छैन । त्यसैगरी कोरोनाविरुद्धको एकमात्र आशाको रुपमा विश्वभर विकास भइरहेका खोपहरुलाई लिइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण (सम्पादकीय)
ज्ञवालीले भारतसँग कालापानी–लिपुलेक सीमा मुद्दादेखि द्विपक्षीय महत्वका सबै विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ । यसले पनि भारतको तयारीलाई उजागर गर्छ ।
संघर्ष, पुनस्र्थापना कि निर्वाचन (सम्पादकीय)
सबैभन्दा खतरनाक कुरा त संसद् विघटनले लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वास धर्मराउने डर छ । विगतमा त निरङ्कुशता निम्तिएको, प्रतिगमन हावी भएको र संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप लागेको हाम्रै अनुभव छ ।
‘किसान शहीद’ घोषणा गर (सम्पादकीय)
उखु किसानहरूले भोगेको सास्ती र मानवीय क्षतिको भने पक्कै पनि कतै हिसाब हुँदैन । यस्तै कुनै राजनीतिक पार्टीको धर्नामा कुनै कार्यकर्ताको ज्यान गएको भए शहीद घोषणा र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन नै हुन्थ्यो । तर गरिब किसानले आफ्नो हक र अधिकारका लागि लड्दा–लड्दै ज्यान गुमाउँदा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको चित्त दुखेको छैन ।
ओझेलमा उखु किसानको न्याय (सम्पादकीय)
देशको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले किसानको मुद्दा छायामा परेको छ । यद्यपी राजनीतिक घटनाक्रमले किसानको आन्दोलनलाई केही असर गरेको भएपनि यसले किसानलाई बिचलित भने बनाएको छैन ।
गुलियो उखुको तीतो कथा (सम्पादकीय)
कृषिमा आधारित उद्योगहरू किसानलाई रुवाएर कति दिन चल्न सक्छन् ? तर चिनी उद्योगहरूले गम्भीरपूर्वक सोचेको देखिएको छैन । भुक्तानी नदिई उद्योग बन्द गर्नु समाधान होइन ।
सडकमा पोखिएको आक्रोश (सम्पादकीय)
केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानहरुमा राजाका पक्षमा प्रदर्शनहरु भएको छ । यस्ता जुलुस र प्रदर्शनमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा नारावाजी हुनेगरेको छ । यस्ता जुलुसहरूबाट राजाको निरंकुश शासनका समर्थक र हर्ताकर्ताहरू निकै उत्साहित भएको देखिन्छ ।
नेकपाको कचिङ्गल (सम्पादकीय)
दलभित्रको यो आन्तरिक विवादले विभाजनको अवस्था सिर्जना हुने शंका पनि गरिएको छ । तर, दल विभाजनको अवस्थासम्म नपुग्न सक्छ । यसका पछाडि केही कारणहरू छन् ।
भ्रमणबाट अपेक्षा (सम्पादकीय)
भारतका विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रींगलाको दुई दिने नेपाल भ्रमण अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको छ । यद्यपी यो भ्रमण दुई छिमेकी मुलुकबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणको निरन्तरता भएपछि पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच बढेको कटुताकाबीच यो भ्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
एकताको महापर्व (सम्पादकीय)
छठपूजाले मनोकामना पुरा हुने विश्वासले जुनसुकै तह, तप्का र क्षेत्रका व्यक्ति तथा समुदायमा आस्था दिनानुदिन बढेको पाइन्छ । त्यसैले छठपर्वलाई आस्था र विश्वासको पर्वस“गै सद्भावको पर्व पनि भनिन्छ ।
मधेशभरि फैलियोस् प्रकाश (सम्पादकीय)
दशैंको पन्ध्रौं दिनमा आउने ठूला पर्वहरूमध्ये तिहार अर्थात् दिपावली पनि एक हो । यो पर्व कात्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारको नामले शुरू भएर कात्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथिको भाइटीकासम्म अर्थात् पाँच दिन मनाइन्छ ।
सम्बन्ध सुधारको उच्चतम् मार्ग (सम्पादकीय)
भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा अहिले काठमाडौंमा छन् । नेपाल र भारतबीच पछिल्लो चरणमा उत्पन्न सीमा विवादपछि उच्चतहका पहिलो औपचारिक भ्रमण पनि हो यो । सीमा विवादको आरम्भ भारतीय सेनाको राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वबाट भयो भने समाधानको पहल पनि उही नेतृत्वबाट हुँदै गरेको देखिँदै छ ।
भारतीय सेनापतिको आसन्न भ्रमण (सम्पादकीय)
नेपाल र भारतका सेना प्रमुख एक–अर्का देशको मानार्थ महारथी हुने हुँदा सेनाले केही गर्दैन भन्ने चाहीं होइन तर भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणका बेला केही भए यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धमा एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ ।